Nipoitra ny lanjan'ny infrareur amin'ny fihenan-tsakafo farafahakeliny, miaraka amin'ny fahatokisana nahazo ny lazany tamin'ny sehatra samihafa. Izy ireo dia ampiasaina ao amin'ny fitaovana fanasan-damba , maina, fitaovana fitsaboana, misy jiron'ny infrarozina ho an'ny terrarium .
Lela infrarera amin'ny fanamainana
Ny mpitaingina miorina amin'ny fantsom-panafody dia sarotra amin'ny fihenan'ny herinaratra, manasitrana haingana ny efitrano izy ireo. Ny fitsipika momba ny fampiasana ny fitaovana toy izany dia tsy ny manasitrana ny rivotra, fa ny famindrana ny hafanam-po amin'ny zavatra manodidina, izay itondrana ny jiro. Raha mandefa ny fitaovana fanasitranana ho an'ny tenanao ianao, dia hahatsapa haingana avy hatrany ny hafanana.
Ny tombony fanampiny amin'ny infrarofo fanatrehana dia ny tsy fisian'ny rivotra madio ary tsy mandoro oksizenina.
Ny jiron'ny infrareur ho an'ny fantsona dia tonga amin'ny endriny maromaro, arakaraka ny halavitry ny haavon'ny hazavana:
Modely lava vetivety - ambany ny mari-pana, miorina amin'ny valindrihana, tsara indrindra ho an'ny trano fonenana sy tranon'olona manokana;
Mandritra ny onja - mety tsara amin'ny efitrano lehibe, toy ny trano fisakafoanana na fivarotana, dia manana mari-piterahana ambony kokoa;
Ny onja fohy - ireo modely avo lenta indrindra izay afaka manasitrana efitrano lehibe toy ny trano na trano famokarana dia ampiasaina koa amin'ny famenoana lamba amin'ny lamba maina.
Lamina hafahafa ho an'ny fitsaboana
Amin'ny fanafody, indraindray ianao dia mahita jiro fampiratiana natao ho an'ny phototherapy. Ny fitsaboana dia natao amin'ny fanampian'ny taratra hazavana miseho, izay misy fiantraikany mahasalama.
Ny tombotsoan'ny jiro infrarra amin'ity tranga ity dia ny fampiroboroboana ny IR mandritra ny hoditra, manatsara ny fiterahana ao amin'io faritra io. Ao amin'ny tavy, dia mihamitombo ny metabolisma, vokatr'izany dia manatsara ny toe-pahasalaman'ny ankamaroan'ny fahasalamana. Afaka mampiasa ny jiro ianao amin'ny fitsaboana sarotra amin'ny aretina isan-karazany.
Nahoana no ampiasaina ny jiro fanafody fitsaboana:
Ny fitsaboana ny havokavoka miaraka amin'ny rhinitis, tonsillitis, otitis. Tena mahomby tokoa ny aretina amin'ny orona, sofina ary tenda.
Fanalefahana ny fanaintainana amin'ny hozatra. Ireo tara-pahazavana dia mandrisika ny faritra misy olana ary manampy amin'ny fanafoanana ny fahatsapana mampalahelo mampalahelo. Ny dingana matetika dia maharitra 20-30 minitra, raha tsy mahatonga ny hoditra amin'ny hoditra sy ny fahatsapana hafahafa hafa izany.
Fitsaboana ny fiantrana. Tena mahazatra ny fanaintainana eo amin'ny fiarahamonina, indrindra rehefa antitra. Amin'ny aretin-kozatra sy aretina hafa mitovy, dia tsara ny mampiasa jiro IR miaraka amin'ny fitsaboana hafa. Ny hafanana mivoaka avy amin'ny jiro, manamaivana ny tsinay ao amin'ny hozatra, mahazatra ny fitombon'ny rà, mampihena ny fampidiran-dra.
Nihena ny tsindry. Ny olona marefo amin'ny fitomboan'ny tsindry matetika, ny lampea amin'ny infrarea dia manampy amin'ny fampihenana ny mety ho voan'ny aretim-po, ny krizin'ny hypertensive, ny atherosclerose.
Fanandramana mifanohitra amin'ny fampiasana jiro fampitaovana
Na dia eo aza ny fananana ara-pahasalamana tena tsara, ny jiro IR dia mifanohitra amin'ny aretina sy ny toe-javatra sasany. Noho izany, tsy azonao ampiasaina izany raha misy olona manana aretina onikolojika, fiterahana fiterahana, tuberculosis.
Ankoatr'izany, tsy voatery hampiasa izany mandritra ny fitondrana vohoka. Tsy mety koa ny mitsabo amin'ny jiro mitafotafo raha misy tsy fahampian'ny foza.
Ny jiro dia mifanohitra tanteraka amin'ny fahazoana hormones, cytostatics, immunomodulators.
Mba hisorohana ny fiantraikany ratsy amin'ny jiro eo amin'ny vatana, tsara kokoa ny mandalo fitsapana alohan'ny hanombohana mampiasa izany ary mijery ny dokotera.
Fitrandrahana elektrika natsangana - ahoana no fomba hifidianan'ny oven azo antoka?
Ahoana ny fampiasana ny paompy?
George Clooney dia nanome $ 1 tapitrisa hiadiana amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra sy extremisma
Psykolojia amin'ny fahantrana
Brigitte Bardot tamin'ny fahatanorany
Ny mpankafy Luc Evans dia mandray anjara amin'ny fiantrana any India
Ny onjam-pom-behivavy vehivavy
Sunburn - inona no tokony hatao?
Tsangambato ho an'ny amboaram-bary eo amin'ny vala
Tongasoa ato amin'ny cafe voalohany manerantany ho an'ny mpikaroka!
Hauts - Fall 2016
Johnny Depp tamin'ny sarin'i Captain Jack Sparrow dia nitsidika an'i Disneyland
Ny fihinanana postoperative
Ahoana ny fomba hanesorana saka handroanana ny fanaka?
Blake Lively ao amin'ny akanjon'ny voafonja dia nilalao niaraka tamin'ny zokiny lahimatoa tao amin'ny rindrin'ny fonja